थाहा पाउनुहोस्! २० वर्षको उमेरमा के चाहन्छन् महिला ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
साउन ८ गते, २०७६ - १९:४२
एजेन्सी । अंग्रेजिमा एउटा भनाई छ “वुमन इज अ फराइन ल्याण्ड”, अर्थात महिला बुझ्नै नसकिने प्राणी हो । महिलाले साच्चिकै जिवनमा के चाहन्छ रु त्यो पनी २० वर्षको योङ्ग उमेरमा । यो आफैमा अनुत्तरित प्रश्न हो । महिलाले यो टिनएजमा केही निश्चित चिजहरु चाहन्छन् । जस्लाई तपाइँ हामिले उनिहरुको सामान्य व्यावहारबाट पनी थाहा पाउन सक्छौँ । के हुन ति चाहानाहरु?
साउन ८ गते, २०७६ - १९:४२ मा प्रकाशित